पार्वती भन्छिन् “विदेशमा नेपाली दाजुभाइको सहयोग पाइएला भनेको त ‘लभ’ पो गरौं भन्छन्’ ! « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
पार्वती भन्छिन् “विदेशमा नेपाली दाजुभाइको सहयोग पाइएला भनेको त ‘लभ’ पो गरौं भन्छन्’ !
काठमाडौं । विदेशबाट फर्केकी आमाजु दिदीले कुवेतमा काम राम्रो छ भनेपछि पार्वतीले विदेश जाने सोच बनाउनुभयो । पार्वतीका तीन जना जेठानी देउरानी त अहिले पनि विदेशमा छन् । त्यसैले उहाँले रोजगारीका लागि विदेश कसरी जाने भन्ने कुरा कसैलाई सोध्नु पर्दैनथ्यो । छनलाई पार्वती र उहाँका श्रीमान् मुकुन्द अधिकारीको त्यति धेरै ऋण पनि थिएन । जग्गा बन्धकीमा राखेको ४० हजार रुपैयाँ तिर्नु थियो ।
तर त्यहाँ पुग्न आमाजु दिदीले भने जस्तो सजिलो थिएन । अवैधानिक रुपमा भारतको बाटो हुँदै उहाँ त्यहाँ पुग्नुभएको हो । पार्वतीसित अरु दुईजना महिला पनि थिए । नेपाल–भारतको सिमाना काटेर दिल्ली पुग्न दलालले अनेक प्रपञ्च रचेका थिए । त्यसबेलाको कुरा सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘आफ्नो हो भन्दै अर्काको बच्चा च्यापेर बोर्डर पास भयौं । लुम्बिनी घुम्न आएको भनेर पुलिसलाई ढाँट्यौं ।’
कुवेतमा घरको काम गर्न त सजिलै थियो, तर श्रीमान्, छोराहरु र परिवारको सम्झनाले धेरै चिमोट्थ्यो पार्वतीलाई । उहाँसित मोवाइल थिएन । श्रीमान र बुबाले फोन गर्दा पनि घरमालिकले बोल्न नदिने । घर बाहिर निस्कनुपर्दा पनि साहु साहुनीसँग मात्रै निस्कन पाइने । मालिकले नै नेपालमा पैसा पठाइदिने ।
तीन वर्ष कुवेतमा बसेर फर्कदा पार्वतीको हातमा अढाई लाख रुपैयाँ थियो । त्यो पैसाले ४० हजार रुपैयाँ ऋण तिरियो । अरु पैसा र छोराहरुको पढाई खर्चमा सकियो । विदेश हिँड्दा ६ र ७ वर्षे दुई छोरा अहिले ९ र १० वर्षका भए ।
बरु पार्वतीलाई लागेको छ, इमान्दार र लगनशिल हुँदा विदेशका घर मालिकले मन पराउँछन् । उहाँको बुझाईमा नेपालले कुवेतसित श्रम सम्झौता नगर्दा नेपाली कामदारले तलब सुविधा कम पाएका हुन् ।
पार्वती अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मकवानपुरमा कार्यालय सहयोगी रुपमा काम गर्नुहुन्छ । त्यहाँ काम गर्दा मासिक झण्डै १३ हजार रुपैयाँ तलब आउँछ ।
विदेशको रोजगारी गरेर फर्केपछि अहिले पनि पार्वतीसित छेलोखेलो हुने गरी पैसा त छैन् । श्रीमान्को अलिकती कमाई र उहाँले कमाएको पैसाले परिवार चल्छ । विदेश गएपनि खासै कमाई भएन । बाबुको मात्रै साथमा रहँदा छोराहरुले पनि खासै राम्रो पढ्न सकेनन् ।
कहिलेकाहीँ विदेश जाने कुरा उठ्दा पार्वतीका श्रीमान् मुकुन्दले भनिहाल्छन् ‘भो अब त्यस्तो कुरा नगर ।’ हुन पनि तीन वर्ष विदेश बसेर फर्केकी पार्वतीलाई मुकुन्दले कहिल्यै हेला गरेनन् । स्रोत– उज्यालो अनलाईनबाट